Alice in Wonderland (2010) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
ယုနျလေးတဈကောငျနောကျကို စူးစမျးပွီးလိုကျခဲ့တဲ့ အဲလပျလေးတဈယောကျ သူစိတျကူးထားတဲ့သူတကယျဖွဈခငျြနတေဲ့ ထူးဆနျးပွီး အပွငျမှတကယျမဖွဈနိုငျတဲ့စိတျကူးယဉျကမ်ဘာလေးထဲကိုရောကျရှိသှားခဲ့ပါတယျ…မွငျမွငျသမြှအရာအားလုံးက သူမအတှကျတော့တကယျကိုအထူးဆနျးတှခေညျြးပဲဖွဈနလေို့နောကျဆုံးတော့ သူမအိမျကိုပွနျဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျပါတယျ…အဲ…ဒါပမေယျ့ သူမအိမျပွနျဖို့လမျးရှာနတေဲ့အခြိနျမှာ အနီရောငျဘုရငျမနဲ့စတှပေ့ါတော့တယျ…အနီရောငျဘုရငျမကတော့ ရကျစကျတဲ့နရောမှာ နှဈယောကျမရှိသူပါ…ဒီလိုရကျစကျတဲ့ အနီရောငျဘုရငျမလကျထဲကနေ လှတျမွောကျအောငျ အဲလပျလေးဘယျလိုလုပျမလဲ…သူမအိမျကောပွနျရောကျနိုငျမလားဆိုတာ စိတျဝငျတစားနဲ့ကွညျ့ရမှာပဲဖွဈပါတယျ….
ယုန်လေးတစ်ကောင်နောက်ကို စူးစမ်းပြီးလိုက်ခဲ့တဲ့ အဲလပ်လေးတစ်ယောက် သူစိတ်ကူးထားတဲ့သူတကယ်ဖြစ်ချင်နေတဲ့ ထူးဆန်းပြီး အပြင်မှတကယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာလေးထဲကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်…မြင်မြင်သမျှအရာအားလုံးက သူမအတွက်တော့တကယ်ကိုအထူးဆန်းတွေချည်းပဲဖြစ်နေလို့နောက်ဆုံးတော့ သူမအိမ်ကိုပြန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်…အဲ…ဒါပေမယ့် သူမအိမ်ပြန်ဖို့လမ်းရှာနေတဲ့အချိန်မှာ အနီရောင်ဘုရင်မနဲ့စတွေ့ပါတော့တယ်…အနီရောင်ဘုရင်မကတော့ ရက်စက်တဲ့နေရာမှာ နှစ်ယောက်မရှိသူပါ…ဒီလိုရက်စက်တဲ့ အနီရောင်ဘုရင်မလက်ထဲကနေ လွတ်မြောက်အောင် အဲလပ်လေးဘယ်လိုလုပ်မလဲ…သူမအိမ်ကောပြန်ရောက်နိုင်မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်….
Option2usersdrive.com 495 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 495 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 495 MB SD (480p)
Option5megaup.net 495 MB SD (480p)
Option6uptomega.com 495 MB SD (480p)
Option 10 yuudrive.me 1.2 GB HD (1080p)
Option 11 megaup.net 1.2 GB HD (1080p)
Option 12 uptomega.com 1.2 GB HD (1080p)
Option 13 storage.msubmovie.com3GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 14 megaup.net3GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 15 usersdrive.com3GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 16 sharer.pw3GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 17 yuudrive.me3GB FHD (1080p) DTS 5.1